बुहारी अर्कै पुरुषसंग एउटै कोठामा मृ’त फेला परेपछि ससुरा मिडियामा, मृत’क पुरुषको श्रीमतीको पनि बेहाल(भिडियोसहित)
May 16, 2020 1675
बर्दियाको बाँसगढी नगरपालि’कामा भएको घ ट नामा केही पर्दा खुलेको छ । एक जना महिलाको घरमा दुई जनालाई मृ त अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । महिला’को श्रीमान अर्कै श्रीमती लिएर भारत गएका छन् भने पुरुष बाँके नेपालगन्जका हुन् ।
दुवै जना विवाहित हुन् । आफ्ना श्रीमान’ले अर्कै श्रीमती लिएर हिडेपछि महिला एक्लै बस्दै आएकी थिइन् । उनले भर्खर नयाँ घर बनाएकी थिइन् । महिलाकै घरमा पु’रुष र महिला मृ त फेला परेका हुन् । भर्खर चैतको अन्तिम साता मात्र उनी सो नयाँ घ’रमा सरेकी थिइन् ।
छिमेकीहरुले ति पुरुष र महिलालाई कहि’ल्यै नजिक नदेखेको छिमेकीले बताएका छन् । ललित पुरुषको नाम रहेको र उनीह’रुको त्यस्तो कुनै सम्बन्ध भएको बारेमा भने आफु’हरुलाई केही जानकारी नभएको बताएका छन् ।
कहिले काँही फोनमा कुरा त हुन्थ्यो तर कुराका’नीमा कम्पनीको बारेमा मात्र कुरा हुने गरेको बताएका छन् । उनीहरु एउटै कम्पनीमा काम गर्ने गरेका थिए । कान्छो छोराको जेठो बुहारी’को यस्तो र ह स्यम य निधन पछि उनको परिवार पनि दुखमा छन् ।
यद्धपी उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदका लागि नि’वेदन दिए । तर बुहारीले नै सम्बन्ध विच्छेद गर्न नचाहेको ससुराले बता । बुहारीले म सम्बन्ध विच्छेद गर्दिन सौता भर्खर आए’की हो छोडेर पनि जान सक्छे भन्दै वुहारीले सम्बन्ध विच्छेद नगरेको बताए । ससुराले उनलाई ६ लाख रुपैया दिए पछि एक्लै बस्दै आएकी थिइन् ।
बुहारीले घर बनाउँदा आफुले सहयोग गरेको ससु’राले बताए । नयाँ घर सरेको एक महिना नहुँदै यस्तो घ ट ना भएको ससुराले बताए । महिलाको एक जना छोरी र उनी मा’मा घर बस्दै गरेको बताइन् । उनीहरु सिजि फ्याक्ट्रिमा संगै काम गर्थे । तर उ’नले ति पुरुष’लाई भने आफुले नचिनेको बताएका छन् ।
लकडाउनको स’मयमा काममै ‘होलान् भनेका श्रीमा’न अर्कै महिलासंग मृ त फेला परेपछि श्रीमतीको बिचल्ली भएको छ । महिला झु ण्डि एको अव’स्थामा र पुरुष खाटमा सुतेको अवस्थामा मृ त फेला परेका हुन् ।
श्रीमती र छोराछोरी समेत रहेको पुरुष ति महिला’का घरमा कसरी गए ? अथवा कसैले उ’नलाई त्यहाँ सम्म कसले लग्यो रु यो अनुसन्धानको विषय हो । उनको परि’वारका सदस्यले भने आफ्नो छोरा त्यस्तो ब्यवहार गर्ने खालको नभएको भन्दै घ ट नाको निष्पक्ष ‘छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
श्रीमानले अर्कै श्रीम’ती लिएर भारत ग’एपछि एक्लै बस्दै आएकी महिलाको घरमा उनी मृ त फेला परेका हुन् । ति महिला’ले भर्खर नयाँ घर बनाएकी थिइन् । भिडि’योमा देखिएको यो घर उनै महिलाको घर हो ।
महिलाकै घरमा ति पुरुष मृ त फेला परे’का हुन् । बाँके जिल्ला निवासी चौधरी ग्रुपको वाइवाई चाउचा’उको फ्याक्ट्री’मा काम गर्ने उनी लकडाउनक कारण बर्दियामै बस्दै आएका थिए ।
आफ्ना श्रीमान अर्कै महिलाको कोठामा महिला’संग मृ त फेला परेको जानकारी पाएपछि श्रीम’तीको वेहा’ल भएको छ । उनले आफ्नो श्रीमानको बारेमा यस्तो ख’बर थाहा पाउँदा विश्वास नलागेको बताइन् ।
उनले कामका लागि वर्दियामै बसे’को होला भन्ने आफुलाई लागेको उनले बताइन् । उनले आफ्नो श्रीमा’नको बा’नी त्यस्तो नराम्रो नभएको बताइन् । कहिल्यै शंका लाग्ने ब्यवहार नै नगरेको उनले बताइन् ।
उनले आफ्नो श्रीमानको मोवाइ’लमा कहिल्यै केटी’को फोन पनि नआएको बताएकी छन् । उनले आफ्नो श्रीमान माथि कसैले ष ड य न्त्र गरेको दावी गर्दै सत्य तथ्य छा’नविन गर्न माग गरेकी छन् ।
दिउसो खानाखान पनि घर जाने, एक मिनेट पनि कतै नभुल्ने श्रीमान यस्तो अवस्थामा फेला परेपछि श्रीम’तीले घ टना रहस्य मय भएको बताइन् । – नेपाल भाइरल न्युज ( भिडियो हेर्नुहोस..
Prevआँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित)
Nextभोलि जेठ ४ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
अमेरिकन आइडलमा नेपाली गायक दिवेशको फेरि पनि दमदार प्रस्तुती (भिडियो सहित)